महाधिवेशनमा आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गरिनेः पुष्पकमल दाहाल «
महाधिवेशनमा आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गरिनेः पुष्पकमल दाहाल
प्रकाशित मिति : पुस १२, २०७८ सोमबार
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा आफूहरूको आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गरिने बताए ।
आइतबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा पार्टी आजको दिनसम्म विचार, संगठन, संरचना, रणनीति र कार्यनीतिको सम्बन्धमा कहाँ चुक्यो त्यसको समिक्षा हुने बताउनुभयो ।
उनले माओवादी पार्टी अहिले कमजोरजस्तो देखिनुमा अरूलाई आरोपित नगर्ने भन्दै आफु प्रमुख नेता भएकाले आफैंलाई चिरफार गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहाने र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहानेहरू सबैलाई उत्प्रेरणा दिने उद्देश्यले प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो महाधिवेशनबाट हामीले गर्न चाहेको कुरा एउटा चाहिँ आत्मासमीक्षा नै हो ।
आत्माआलोचना नै हो । हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा, रणनीति, कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौं ? र यति चाहिँ म सुरुमै भन्न चाहन्छु, यो प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै आत्मसमिक्षा मैले मेरै गरेको छु । तपाईंहरूले त्यो प्रतिवेधन पारित भइसकेपछि देख्नुहुनेछ ।
जनयुद्धको तयारी र नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई जुट्यो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, बाह्रबुँदे समझदारी गर्ने, संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने, संविधानसभा प्रधानमन्त्रीजीले जसरी भन्नुभयो, यो सबै अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो । अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोरजस्तो, माओवादी पार्टी कमजोरजस्तो देखिनुमा मैले अरुलाई आरोपित गरेर हुँदैन ।
मैले प्रमुख नेताको हैसियतले म भित्र नै खोज्नु पर्छ भनेर मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु । मलाई लाग्छ यसले हामी सबैलाई, खालि माओवादीलाई मात्रै होइन, नेपालमा साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहाने, समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडी बढाउन चाहानेहरू सबैलाई एउटा उत्प्रेरणा देओस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौं ।’
उनले नेकपा एमालेसँग गलत उद्देश्यले एकता नगरेको भन्दै के कारणले पार्टी विभाजन हुन पुग्यो समीक्षा आत्मसमीक्षा गर्न नेकपा(एमाले)का नेता, कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।
देशलाई स्थायित्व दिन र समाजवादतिर लैजाने उद्देश्य राखेर एकता गरिएको उनले स्पष्ट पारे । पार्टी एकता गरेर गल्ती नगरेको जिकिर गर्दै उनले समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका थिएनौं । म सिंगो नेकपा(एमाले)का साथीहरूलाई भन्न चाहान्छु, हामीले गल्ती गरेका थिएनौं ।
फेरि एकचोटी आत्मसमिक्षा गरौं। कहाँ थियो त गल्ती ? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौँ ? के कारणले त्यत्रो सपना हामीले आफैले भत्कायौँ ? त्यसको समिक्षा गरौँ । हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ । हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन । हामीले यो देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पूरा गर्ने उद्देश्य राखेका थियौं ।’
आइतवारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच दिनसम्म चल्ने भएको छ । सोमबारदेखि बन्दसत्र सुरु हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।